Lactose ukungabekezelelani ezinganeni > Ukudla ngesifo sikashukela
I-Lactose ukungabekezeleli - izimpawu nokubonakaliswa ezinganeni nakubantu abadala, ukuxilongwa nezimpawu zokudla okunempilo
Ukungabekezelelani kwe-lactose ukungakwazi kwamathumbu ukukhiqiza i-enzyme yayo. Eqinisweni, ukungabekezelelani kwe-lactose kuwuphawu oluphambili lokuntuleka kwe-lactase, okungukuthi, ukuncipha komsebenzi wokuqhekeka kwe-lactose emathunjini.
I-Lactose yi-carbohydrate eyinhloko etholakala emikhiqizweni yobisi. Kuqukethe ushukela kanye ne-galactose. Lapho i-lactose yephulwe, i-lactase ye-enzyme ithululiwe. Ukushoda kwe-lactase emzimbeni kuyimbangela yokungabekezelelani kwe-lactose.
Lesi simo enganeni singanqunywa ngofuzo, okungukuthi, ifa. Imvamisa ibonwa ezinganeni ezizalwe ngaphambi kwesikhathi, kanye nasezinsaneni ezinesisindo esanele.
Ezinganeni esezikhulile, ukungabekezeleli kwe-lactose yesibili kuvame ukwenzeka ngenxa yokugula okungamahlalakhona noma okunzima. Izimbangela zokungabekezelelani zingaba:
ukungezwani komzimba ngamaprotheni obisi lwenkomo,
Ngakho-ke, inani lezinto ezenza ukuthuthukiswa kwalesi simo zifaka:
ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi
ama-pathologies athinta amathumbu amancane, lapho inqubo yokuqhekeka kwe-lactose nokwenziwa kwayo yenziwa khona.
Izimpawu zokungabekezeleli kwe-lactose ezinganeni ezincane zivame ukubonakaliswa ngesimo sesitulo. Inomphunga omuncu futhi ukungaguquguquki okumanzi. Ezinganeni, i-pathology ibuye izibonakalise ngesimo sokuphindaphindwa okujwayelekile nokukhishwa ngamandla, ukugcotshwa kwemizwa, imizwa ngesikhathi sokudla, ukwenqaba ibele noma ibhodlela.
Imvamisa, izingane ezindala zilela ontanga bazo ekukhuleni komzimba: zikhula kabi futhi zikhulisa isisindo esincane. Ngaphezu kwalokho, bangathola ukwehla kwezinga lemisipha nokuqaqanjelwa okukholisayo.
Ukubonakaliswa komtholampilo ngokungabekezelelani kwe-lactose ezinganeni ezindala kufaka nokugqwala esiswini nokugcwala. Kwezinye izimo, ubuhlungu buvela esifundeni se-umbilical: are spasmodic.
Ukungabekezelelani kwe-lactose, phakathi kwezinye izinto, kungadala ukungabekezeleleki, ukuguquguquka kwemizwelo ejwayelekile nokukhula ngokukhathala kwengane.
Ukuxilongwa kokungabekezelelani kwe-lactose enganeni
Ukungabekezelelani kwe-lactose ezinganeni kutholakala ngesisekelo sokubonakaliswa komtholampilo. Uma kunesidingo, ingane inikezwa izindlela zokuhlola ezingezekile, ngokwesibonelo, ukukhomba i-pathology eyasivusa lesi simo.
Njengomthetho, izindlela zokuxilonga zokudla ziyasetshenziswa, phakathi nalapho imikhiqizo equkethe i-lactose ingafakwa ekudleni kwengane. Emva kwalokho, babheka isithombe somtholampilo futhi bahlaziye indle. Uma izimpawu zincipha, ne-pH yezindunduma kuyinto ejwayelekile futhi iphakeme, khona-ke ingane inokuntuleka kwe-lactase.
Futhi, ucwaningo lwe-chromotagrophic lungabekelwa izingane, ezizokuvumela ukuthi ukhethe ukudla okwanele.
Ukushoda kwe-lactase yesibili akunamiphumela emibi. Ngokuhamba kwesikhathi, umzimba wengane uzoqala ukumunca kahle noma imiphi imikhiqizo yobisi. Ngemuva kwezinyanga ezingama-6-7, ukungabekezelelani kwe-lactose kuzodlula ngokuphelele.
Ngokugula okuyinhloko, ukungabekezelelani kwemikhiqizo ene-lactose kuzohlala impilo yonke. Kepha ukungabekezelelani ngokuphelele kwe-lactase akuvamile, ngakho-ke izingane ezinalesi sifo zisadla ubisi oluthile. Izimpawu ze-pathology zizoqala ukuvela kuphela uma inqubo inyuka. Kunqunywa ngamunye esimweni ngasinye.
Ngezinye izikhathi ukungabekezelelani kwe-lactose eyinhloko kuhlanganiswa nokwesibili. Kulokhu, isimo se-microflora yamathumbu kufanele sibhekwe njalo.
Abazali bezingane abanesifo se-lactose kufanele banakekele ukondliwa okhethekile kwengane. Kufanele ifake ukudla okune-lactose ephansi, ngokwesilinganiso esifanele ingane ngokuya ngeminyaka yayo. Futhi, imikhiqizo ye-lactic acid ingafakwa ekudleni: imvamisa izingane ezinesifo se-lactase zibekezelela kahle.
Awukwazi ukusebenzisa ubisi oluhlanganisiwe noma oluhlangene, imithi lapho i-lactose ikhona. Uma kuvela izimpawu zesimo, kufanele ukhombise ingane udokotela ozomxilonga futhi anikeze nokwelashwa okwanele.
Esimweni lapho ukungabekezelelani kwe-lactose kukhula njenge-pathology yesibili, udokotela uphatha lesi sifo esiyimbangela. Kulokhu, ingane yabelwa ukudla okukhethekile. Uma ukuthethelelwa noma ukululama kutholakala, imvamisa baqala ukukhulisa kancane kancane uhlu lwemikhiqizo efakwe ekudleni. Kulokhu, isithombe somtholampilo walesi sifo sibhekwa njalo, kanti kwenziwa izivivinyo ezidingekayo.
Ngokungabekezelelani kwe-lactose eyinhloko, izingane zinikezwa ukudla okufanele zikunamathele kukho konke impilo yazo. Ukudla okunjalo, ngokomsebenzi wezokwelapha, akukulethi noma yikuphi ukuphazamiseka okuthile.
Izingane ezingaphezulu konyaka ubudala ziyelulekwa ukuba zingene esikhundleni sobisi ngemikhiqizo ephansi ye-lactose nemikhiqizo yobisi omuncu. Imikhiqizo ye-confectionery enama-filters obisi nayo ayafakwa ekudleni. Kwezinye izimo, izingane zinikezwa izidakamizwa ezine-enzyme ye-lactose, ezithathwa zihlanganiswa nemikhiqizo yobisi.
Kunezindlela ezimbalwa zokuvimbela ezingavimba ukwanda kokungabekezelelani kwe-lactose ezinganeni. Phakathi kwazo:
ukwelashwa okufika ngesikhathi kwanoma yikuphi ukutheleleka kwamathumbu kanye ne-pathologies yephepha lesisu,
ukondliwa okufanele kwezinsana.
Izindlela zokuvimbela ezesibili zifaka ukulandela ukudla okuncike ekusetshenzisweni kokudla okune-lactose noma ngaphandle. Lokhu kuzogwema ukuvela kwezimpawu zokuntuleka kwe-lactase.
Ngokuvamile, ukudla okune-lactose akunakuhlukaniswa kokudla, ngoba lokhu kuzonciphisa inani le-calcium engena emzimbeni wengane.
Kuyini ukungabekezelelani kwe-lactose?
Lokhu ukwephula emsebenzini wegayigayi yokugaya ukudla, ebonakala ngokungabonakali ngokuphelele noma okuyingxenye kwe-lactose, ngenxa yokuntuleka kwe-enzyme ebhekele ukugaya imikhiqizo yobisi (into ebizwa ngokuthi “lactase”). Izimpawu zokuqala ze-pathology zivela ebudaleni nasebusheni. Ezinganeni ezisanda kuzalwa, ukwehla komsebenzi we-lactase emathunjini kuyaqabukela kakhulu. I-Alactasia (elinye igama lokungabekezelelani ubisi) kungenzeka ngenxa yezici ezahlukahlukene, kufaka phakathi ifa, ukugula kwamathumbu okwenzeka kakhulu, njll.
Izinzuzo ze-lactose zomzimba
I-disaccharide carbohydrate ebisini, okuwumkhiqizo wokuqhekeka kwe-galactose noshukela, ibizwa nge- lactose (aka “ushukela wobisi”). Kungumthombo ocebile wamandla adingekayo ekukhuleni, ekuthuthukiseni nasekulondolozeni ukusebenza komzimba. Izici ezizuzisayo ze-lactose yilezi:
ukusiza ekukhuleni kwezicubu zomzimba,
ukubamba iqhaza ukumuncwa kwe-calcium,
ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezifo zesistimu yezinzwa,
ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi, ngaleyo ndlela kunciphise ingozi yokuqhamuka ne-pathologies yesistimu yethambo yegazi,
ukugcina i-microflora yamathumbu enempilo, ngoba i-lactase isebenza njengendawo efanelekile yempilo ye-lactobacilli.
Izimbangela Zokungabekezeleleki Kwimikhiqizo Yobisi
Kukhona ama-hypolactasia we-primary (i-congenital) ne-secondary (etholakele). Esimweni sokuqala, i-pathology iba ngokushesha ngemuva kokuqala kokondla usana ngobisi lwebele noma ifomula yezingane. Ngokungabekezelelani kwe-lactose yesibili, izimpawu zomtholampilo zingavela kunoma yimuphi unyaka ngaphansi kwethonya lezinto ezahlukahlukene. Isakhi sofuzo esenzelwe i-hypolactasia yisifo esingazwisiseki kahle izimbangela zentuthuko.
Odokotela bayaqiniseka ukuthi ukuzibandakanya komuntu kwezinhlanga kudlala indima ebalulekile: ngokwesibonelo, iphesenti eliphezulu lokuphazamiseka kwemvelo liyabonakala phakathi kwezakhamizi zase-Afrika nase-Asia, amaJuda kanye nabantu baseningizimu. Akuvamile ukuthi kube nabantu abaswele ngokuphelele i-enzyme echitha i-lactose, futhi amacala anjalo aqoshwa kuphela kubantu bendabuko baseNyakatho Melika.
Ngaphezu kwesici sofuzo, ifa libuye lithinte ukuthuthukiswa kokungabekezelelani kokuzala kwe-lactose. Ithuba lokuba nengane enokungezwani nemikhiqizo yobisi liphezulu kakhulu uma omunye noma bobabili abazali benaso lesi sifo. Iqembu lengozi lifaka nezinsana ezizalwe ngaphambi kwesikhathi. Ezinye izimbangela zokungabekezelelani kwe-lactose yilezi:
Isifo se-Celiac. Le pathology ibonakala ngomonakalo omncane wamathumbu we-villi ngu-gluten - okuyingxenye yokudla okusanhlamvu. Ngokomunye umbono, ngenxa yokuntuleka kwama-enzymes akhethekile, leli protein liqongelela eluswini lwe-mucous lwesitho, lusebenze ngokunobuthi. Ngokomqondo we-immunological, enye yezakhi ze-gluten (gliadin) ibangela ukwakheka kokuphendula kwe-immunological, umphumela wawo yi-hypolactasia.
Isifo sikaCrohn. Lesi sifo singathinta noma iyiphi ingxenye yamathumbu. Ezindaweni zokuvuvukala, kuvela izilonda, i-microflora iyaphazamiseka, kuphakama izinkinga ze-gastroenterological. Ngokuphikisana nesizinda se-allergies, ama-enterocytes (amaseli wamathumbu epithelial) alinyazwa yi-immunoallergic complexes. Bahlala kuma-mucosa emathunjini, okuholela ekunciphiseni kwekhono lamangqamuzana egazi abomvu okufihla i-lactase.
Ukugcwala ngokweqile kwamaprotheni obisi. Ngokuvamile lokhu kuphambuka kwenzeka ezinganeni ezisanda kuzalwa. Inani lama-enzyme obisini lomuntu luyehluka ekuqaleni nasekupheleni kokuncelisa. Kokubekwe kokuqala, kune-lactose eyengeziwe, ngakho-ke ingane ithola masinyane umthamo omkhulu wale ngxenye. Akuwona njalo amathumbu akhe okwazi ukudonsa ngokushesha i-lactose, ngenxa yalokho kuboniswa izimpawu zesikhashana ze-alactasia.
Izici ezifaka isandla ekuthuthukisweni kwe-hypolactasia
Ukutheleleka ngaphakathi kwamathumbu (i-dysentery, umkhuhlane wamathumbu, i-salmonellosis) kuyimbangela ejwayelekile yokwehla kokukhiqizwa kwe-lactase edingekayo ekucubunguleni amaprotheni obisi. Lesi sifo senzeka ngenxa ye-dysbiosis, lapho kunokungalingani phakathi kwama-microflora amahle nokubi. Enye indlela yokwakhiwa kwesifo esithinta amathumbu amancane kungenxa yomonakalo wamangqamuzana egazi abomvu. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu be-hypolactasia kuncike ekuqapheleni kwamagciwane namagciwane. Izici zobungozi ekwakhiweni kwe-pathology yilezi:
iminyaka (abantu abavuthiwe nabadala bayathanda ukungabekezelelani i-lactose),
Ukwelashwa ngemisebe (iziguli ezithole i-radiotherapy zinciphise ukungatheleleki, okungaholela ku-alactasia),
ubuzwe (ama-Afrika, abantu base-Asiya basengozini enkulu yokuthola lesi sifo),
ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi (izinsana ngaphambi kwesikhathi zisengozini, kepha ukuxilongwa kusenesikhathi nokwelashwa okufanele ezimweni eziningi kunikeza umphumela omuhle.
Umuthi wanamuhla uhlukanisa izinhlobo ezimbili eziyinhloko ze-pathology ezihambisana nokungakwazi komzimba ukugaya amaprotheni obisi ngokugcwele noma ngokwengxenye. I-Alactasia ihlukaniswa kanjena:
Ngofuzo oluzuzwe njengefa. Uhlobo lwesifo esijwayelekile kakhulu esivame ukwenzeka kubantu abangaphezu kweminyaka engama-20.
Okungapheli (kutholiwe). Ikhula ngokumelene nesizinda sezinkinga amathumbu amancane (ukudla okungalinganiseli, ukusebenza kwangaphambi kwamathumbu, i-ulcerative colitis, isifo sikaCrohn, isifo se-celiac, i-gastroenteritis, i-chemotherapy).
Isizathu sokuthuthukiswa kokungabekezelelani kwe-lactose ukuguqulwa kwezakhi zofuzo. Lokhu kuyinto engajwayelekile lapho isibonakaliso sesifo emntwaneni siziveza khona nje ngemuva kokuzalwa. Izinhlobo ze-hypolactasia yokuzalwa zifaka:
I-Alactasia yosanda kuzalwa. Lesi sifo sinzima, sidinga ukubambelela ngokuqinile ekudleni. Enye yezizathu ukungavuthwa kohlelo lwe-enzyme, ngenxa yokuthi ingane yehluleka ukugaya amaprotheni obisi. I-Lactase ayisebenzi ngokuphelele.
Ukwehluleka kokuzala ngokuzalwa sekwephuzile. Kubonakala eminyakeni elandelayo. Kwesinye isikhathi, izimpawu zokuqala zenzeka ezinganeni kusuka eminyakeni eyi-5, kepha isikhathi esiningi lesi sifo iba khona emva kweminyaka engama-20. I-Congenital hypolactasia enokuqala sekwephuzile inobuncane uma iqhathaniswa nezinye izidalwa.
Ukwehluleka okwesikhashana kwezinsana ngaphambi kwesikhathi. Kwenzeka ezinganeni ezizalwe ngaphambi kosuku olubekiwe. Ubumqoka besifo bumlingisi ophanjanisiwe. Lapho amaprotheni obisi engena emzimbeni, imvuthuluka ingakha i-metabolic acidosis - ukwehla kwe-pH yegazi. Ukwephulwa kwemibiko kungenxa yokungavikeleki kohlelo lwe-enzyme lwengane.
Ukuqala kwalesi sifo kuhlotshaniswa nezifo ezichitha ulwelwesi lwesisu esincane. Lokhu kufaka phakathi i-dialkia, i-bowel canelable syndrome. Ngaphezu kwalokho, i-hypolactasia yesibili ingavela ngenxa yokuqalwa kabusha kwamathumbu amancane. Le ndlela ye-pathology ibonakaliswa ngenxa yokwehlulwa kwama-enterocytes, ngasikhathi sinye kukhona ukwephulwa kokuhlanganiswa kwe-sucrose ne-trehalose - ama-enzyme adingekayo ukuqinisekisa ukugaya okujwayelekile.
Ingozi yokutholwa kwe-alactasia ngokwemvelo inyuka nobudala. Kwesinye isikhathi ezinganeni zasenkulisa, ukusabela okungezwani nobisi kwenzeka ngaphandle kokungenelela kwezinto ezingezekile, ngehle izinga le-lactase ngaphansi kwesimo esivumelekile. Ukungabekezelelani kwe-lactose kuboniswa ngenxa yento eyodwa noma eziningi ezingezinhle:
ukusetshenziswa ngokweqile kobisi isikhathi eside, ikakhulukazi lapho umuntu esemdala.
Ukungabekezelelani kwe-lactose kuhlukaniswe kugcwele noma ingxenye: ifomu lincike enanini lokukhiqizwa kwe-encyme ye-lactase. Ngokungakwazi ngokuphelele komzimba ukugaya amaprotheni obisi, wonke umthamo wezimpawu zalesi sifo uyabonakala, nge-hypolactasia eyingxenye, izimpawu azinamandla kangako. Izimpawu zingadalwa yinombolo yeminye i-pathologies, ngoba ayinazici ezithile. Noma kunjalo, uma ibonwa ngemuva kokudla imikhiqizo yobisi, khona-ke akukho kungabaza ngokuba khona kokungabekezelelani kwe-lactose.
Izimpawu zokungabekezeleli kwe-lactose kubantu abadala
Ukwanda kokubonakaliswa kwesithombe somtholampilo kuya ngezinga lokukhiqizwa kwe-lactase emzimbeni womuntu. Njengomthetho, izimpawu zesifo ziqala ukubonakala kungakapheli imizuzu engama-30-120 ngemuva kokudla imikhiqizo yobisi. Isici sabadala izimpawu zokungabekezelelani kwe-lactose yilezi:
izitofu ezixegayo (kepha hhayi kaningi, ngokungathi nesifo sohudo),
ukuqhuma, ukuqhuma kwesisu,
ukungakhululeki, izinhlungu ku-peritoneum,
ukwehluleka (nge-alactasia ngokuphelele),
ukuba khona kokugcotshwa kwesikhumba
Lesi sifo ezinganeni sivezwa ngokuhlukile, kuya ngevolumu ye-enzyme ekhiqizwayo nokusabela komzimba kuyo. Kulokhu, izingane ezine-hypolactasia zihlukaniswe ngamaqembu amaningi:
Izingane ezikwazi ukudla ingilazi eyodwa yobisi ngosuku ngaphandle kwemiphumela emibi, ngenkathi zigaya imikhiqizo yobisi ngaphandle kwezinkinga.
Izingane ezingabekezeleli ubisi futhi zingadla imikhiqizo yobisi ebilisiwe kuphela ngobuningi obunqunyelwe.
Izingane ezinesistimu yokugaya inyama yazo ihlangabezana ngokulinganayo nobisi nasemikhiqizweni yobisi.
Izingane ezinezimpawu ze-alactasia zenzeka ngisho nalapho zidla ukudla ngamaphesenti amancane obisi.
Izimpawu zokuntuleka kwe-lactase ziyabonakala ezinganeni kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila kwazo.Izimpawu zibonakaliswa ukuncelisa ibele noma ukusebenzisa ifomula yengane. Lesi sifo sitholakala yilezi zimpawu ezilandelayo:
isisu sengane sivuvukile, isikhathi sishubile (lokhu kuyabonakala ngesikhathi sokuhlolwa nokubukwa)
ukwanda kwegesi (ngenxa yokuthi ukukhululeka kwenzeka, ingane ilahlekelwa yinhliziyo, ikhala, ikhathazekile),
ukuvumelana kokunyakaza kwamathumbu kuba uketshezi, i-foamy, iphunga lesihlalo sinama-acidic, kukhona ukungcola kwesikhunta,
inani lokunyakaza kwamathumbu linyuka noma ukuqunjelwa kwenzeka (uphawu lokugcina luphawu lwezinsana ngokudla okufakwayo),
ukukhafula ngemuva kokudla
ngoba izinto eziningi zokudla ezidliwayo azithakwa, ezinganeni izinsimbi zesisindo zincipha,
ingane ingahlushwa i-colic, isicanucanu, ukuhlanza,
ukuqubuka komzimba esikhumbeni, kuvuvukala kolwelwesi lwama-mucous.
Ukwelashwa kwe-Lactose ukungabekezeleli
Azikho izindlela ezingalapha ngokuphelele umuntu kule ndlela, ngenxa yalokho, ukwelashwa kwe-alactasia kuhloselwe ukunciphisa noma ukususa ngokuphelele izimpawu zayo. Kulokhu, isiguli sinqunywe ekudleni okunciphisa noma ukuqeda ngokuphelele amaprotheni obisi. Ngaphezu kwalokho, udokotela angakunikeza imishanguzo yokuthi uyeke ukubonakaliswa komtholampilo, ukwelashwa ngevithamini. Ukwelashwa kukhethiwe ngakwelinye isiguli ngasinye, kucatshangelwa:
degree yokuntuleka kwe-enzyme.
Isisekelo sokwelashwa kwe-alactasia ukukhipha okuphelele noma okuyingxenye kokudla okuqukethe i-lactulose kumenyu yesiguli. Ngokuya kobunzima bezimpawu, isiguli siyelulekwa ukwenqaba ubisi kuphela noma kuyo yonke imikhiqizo equkethe ubisi (i-kefir, ushizi, ushizi wekhokho, u-ayisikhilimu, iyogathi, ushokoledi wobisi, njll.). Uhlu lokudla okuvinjelwe luhlanganisa:
imikhiqizo yenyama enjengososeji, amasoseji, isando, isoseji ebilisiwe,
amasoso (ketchup, imayonnaise, lwesinaphi),
izitsha zokudla okusheshayo - amazambane abunjiwe, amasobho, ama-noodle, i-jelly ezikhwameni,
inyama okucashile (ubuchopho, izinso, isibindi),
Ukudla kufanele kube nokulinganisela, ngakho-ke kubalulekile ukuthi isiguli siqaphe ukusabela komzimba waso kumkhiqizo othile, ukuze singabeki eceleni ukudla okwanele okubekezelelwa kahle. Njengomthetho, ukungafakwa ngokuphelele kwemikhiqizo yobisi omuncu ekudleni akudingekile, futhi umuntu one-hypolactase angadla i-100-150 ml ye-kefir ngeviki ngaphandle kwemiphumela. Ngaphezu kwalokho, hhayi kuphela umthamo we-servings odlala indima, kepha futhi nezikhathi eziphakathi kokusetshenziswa kwemikhiqizo yobisi. Ukwenza kube lula ukunamathela ekudleni, kufanele ube nedayari yokudla.
Njengoba imikhiqizo yobisi iqukethe izinto eziningi ezilusizo, kubalulekile ukubuyisa ivolumu yayo edingekayo ngokufaka esikhundleni se-lactose. Kulokhu, ushizi we-tofu, ubisi lwe-soy kanye ne-cottage shizi uzokusiza. Imikhiqizo ye-Soy yi-hypoallergenic futhi iqukethe amaprotheni amaningi wemifino. Ngokungabekezeleli kwe-lactose, ngaphezu kwalokho, kuvunyelwe ukusebenzisa:
inhlanzi, imfanzi, squid, okunye ukudla kwasolwandle,
inyama ebhakisiwe, ebilisiwe (inkukhu, inyama yenkomo, ikalikuni, unogwaja),
i-oyela yemifino (umnqumo, ummbila, udle, i-sunflower),
isinkwa rye, ukolweni, bran,
imifino, izithelo, iziphuzo zemvelo,
ujamu, uju, ujamu, ushukela,
ushokoledi obabayo omnyama
ubhaxu, irayisi, ipasta,
ikofi, itiye, i-jelly eyenziwe ekhaya, i-compote.
Izici zokudla kwezingane
Esimweni esibi kakhulu sengane, kuphekwa udaba lokushintsha ubisi lukamama lube lubisi lwe-lactose-free lubhekwa. Ngokuqina okubuthakathaka kwezimpawu zokuntuleka kwe-lactase, umama ongumhlengikazi unikezwa ukudla okuqinile. Uma owesifazane enqaba ukudla ukudla okuphezulu ushukela wobisi, iphesenti le-lactose ebisini lakhe liyoncipha, nomthwalo osesemathuneni wengane uzokwehla kakhulu.
Lapho kutholwa ama-pathologies ezinsaneni, adluliselwa ezingxubezini ezinokuqukethwe okuphansi kwe-lactose noma ngaphandle kwawo nhlobo. Izinhlamvu ezinjalo zinothile kuzo zonke izinto eziwusizo ezidingekayo ukukhula nokukhula, ngakho-ke, abazali akufanele babe nezizathu zokukhathazeka. Ngokuzayo, ngemuva kokubonisana nochwepheshe, ungazama ukwethula kancane kancane inani elincane le-ingxube nokudla okuqukethe ubisi ekudleni kwengane.
Ukuthatha izidakamizwa eziqukethe i-encyme ye-lactase
Ukwelashwa kwezidakamizwa kwe-alactasia kumiselwe uma ukudla kungalethi ukuthuthuka okulindelekile, futhi isiguli singazinzanga. Ukungabekezelelani kwe-lactose kubantu abadala kuyisisekelo sokunquma izidakamizwa ezithuthukisa ukugaya, zivuse ukukhiqizwa kwe-lactase, noma ziqukethe le enzyme. Uhlobo lokugcina lwemithi lutholakala ngefomu le-liquid noma amaphilisi. Imikhiqizo elandelayo ifakwe ubisi lwamaprotheni emathunjini kuya kushukela olula:
I-Lactase ne-Lactase baby (yezingane),
Isigaba sesibili sokwelashwa sifaka i-inoculation yamathumbu enezimbali ezisebenzayo zokusungula ibhalansi yezinto ezidingekayo ukugaya okujwayelekile. Kuze kube manje, udokotela unquma ama-probiotic aqukethe i-lactobacilli (umthamo kanye nesikhathi sokwamukelwa kukhethiwe). Bacindezela ama-pathogenic bacteria, basiza ukugaya ukudla. Ngaphezu kwalokho, le mishanguzo inomthelela ekufakweni kwe-lactose, ukuvimbela ukukhiqizwa nokuqongelelwa kwamagesi emathunjini.
Ngokushoda kwama-enzyme okuqhekeka kwe-lactose, amathumbu ahlupheka kakhulu, ngakho-ke isiguli sikhonjiswa siphuza imithi ethuthukisa i-microflora yakhe. Bathe:
Ukwelashwa okubonakalayo kokucasulwa kwamathumbu okubangelwa yi-hypolactasia
Ukuqeda noma ukunciphisa ubukhulu bezimpawu ezingemnandi, isiguli sinqunywe amaphilisi okuhudula noma ukuqunjelwa, othuthukisa umsebenzi wesisu kanye nesisu samathumbu. Ngaphezu kwalokho, ukunciphisa imiphumela emibi ye-pathology nokususa ukuntuleka kwevithamini okubangelwa yiyo, inkambo yokuthatha i-vitamin-mineral complexes yenziwa. Ukulungiswa kukaVitamin D no-calcium kuvame ukunqunywa.
Ngohudo (i-frequent, i-freool), okungenye yezimpawu zokungabekezelelani kwe-lactose, kuboniswa le mithi elandelayo:
Loperamide. Umuthi wehlisa ithoni yezicubu zamathumbu, unciphise futhi uvuselele i-peristalsis. Ngasikhathi sinye, iLoperamide ithambisa i-anal ndima, inikeze umphumela wokuphikisana. Umuthi uthathwa emaphaketheni ama-2 kanye, ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala kwenqatshelwe.
I-Diosmectite. Inomphumela obanzi wokumunca, ususa uketshezi ngokweqile kwikholoni, uqinisa isimo se-membrane se-mucous. Kubantu abadala, umuthi unqunyelwe ama-sachets ama-3 ngosuku, ezinganeni kuze kube unyaka - i-1 sachet, ezinganeni ezindala - imithamo emi-2.
I-Attapulgite. Ithuluzi likhulisa okuqukethwe kwamathumbu, kuqeda uhudo. Ngaphezu kwalokho, i-Attapulgat, njenge-antispasmodic, idambisa izinhlungu. Isidakamizwa sisetshenziswa ezibhebheni ezi-2 ngemuva kokuhamba kwamathumbu ngamunye kuze kube yilapho isihlalo sizinzile ngokuphelele. Izingane zikhonjiswa uhhafu womthamo.
Ukwanda kwe-flatulence yimbangela eyinhloko yobuhlungu obukhulu nokungaphatheki kahle esiswini ngokuntuleka kwe-lactose. Ezinganeni ezisanda kuzalwa, lolu phawu lubangela i-colic yamathumbu. Izidakamizwa ezisetshenziselwa ukuqhakaza yilezi:
Ingane Kalm Isiza ukususa amagesi emathunjini, inomphumela wokuphumula emisipha yezitho zokugaya, ngaleyo ndlela iqede i-colic. Ithuluzi linikezwa izinsana ngaphambi kokondla amaconsi ayi-10.
I-Espumisan. Isetshenziselwa ukunciphisa ukwakheka kwegesi nge-2 tsp. yabantu abadala kanye ne-1 tsp. - ezinganeni.
Isifo sezinhlungu ngokungezwani ne-lactose kungenxa yokudlula ngokweqile kwamathumbu wamathumbu, i-spasm spasm kanye negesi, ngakho-ke, izidakamizwa ezinomphumela wokuphumula kwemisipha (antispasmodics) zisetshenziselwa ukuyiqeda. I-Alatasia ingalashwa ngemithi elandelayo:
Cha-shpa. Iqabula amathumbu, isuse iminyakazo. Izingane zobusha ziboniswa i-180 mg ngosuku, ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala - 80 mg, umthamo wabantu abadala uvela ku-120 kuye ku-240 mg.
I-Spasmodic. Yehlisa ithoni yepheshana lesisu, ngaleyo ndlela isuse izinhlungu. Abantu abadala bathatha i-Spasmomen 1 capulethi kathathu ngosuku, i-contraindicated ezinganeni.
Kuyini ukungabekezelelani kwe-lactose
Emabeleni neminye imikhiqizo eminingi, kune-lactose, ushukela oyinkimbinkimbi. Emzimbeni ophilile, ngesikhathi sokugaya, kuphuka kalula kube ushukela olulula (ushukela kanye ne-galactose) yi-enzyme lactase futhi ecijiswe egazini.
Ukungabekezelelani kwe-lactose (hypolactasia) kuvezwa njengokungakwazi komzimba ukugaya i-lactose ngokugcwele noma ingxenye. Ngokuvamile, isizathu salokhu ukuntuleka kokukhiqizwa kwama-enzyme - lactase.
Ngokuya ngesimo sempilo kanye nenani le-lactase elenziwe ngumzimba, lesi sifo singabonakala ngesimo esibi noma singazwakali nhlobo. Izimpawu zokubekezelela zingavela ngokushesha nje ngemuva kokuzalwa noma lapho umuntu esekhulile.
I-hypolactasia etholakele ibhekwa kubantu abadala kuphela, ngoba ukukhiqizwa kwe-enzyme kunciphisa minyaka yonke ngezizathu zemvelo. Lapho kunezici ezibikezela kusengaphambili, lesi sifo singakhula esikhathini esifushane futhi sibe yisifo esivela kwesikhashana.
Ukungabekezelelani kwe-lactose, okuyizimpawu zazo ezifana nezifo ezithile zomgudu wesisu noma umkhuhlane, kungahamba nomuntu impilo yakhe yonke noma kunyamalale ngokuphelele ngemuva kwekhambi lokwelashwa futhi kuqede izimbangela zokubonakala kwawo. Isifo esinjalo asikuthinti ukusebenza komzimba wonke, kepha ukubonakaliswa kwesikhathi eside kwezimpawu kungaholela emiphumeleni emibi.
Izimbangela ze-Lactose Intolerance
Imbangela eyinhloko yokungabekezelelani kwe-lactose ukuvela kofuzo. Ekuzalweni, umaka wezakhi zofuzo we-C1391OT utholakala egazini lezingane, okukhombisa izinga eliphansi lokukhiqizwa kwe-lactase ngaphandle kokulimala kwamathumbu.
Kulesi genotype, ama-genome ama-3 ahlukaniswa:
I-SS (eyabantu abangabekezeleli i-lactose ephelele),
ST (lapho kukhiqizwa khona i-enzyme ngamanani amancane),
TT (lapho i-lactose igxilwe ngokujwayelekile).
Izimpawu zokungabekezelelani kwe-lactose ngesikhathi sokuguqulwa kwezakhi zofuzo zivela ngemuva kokudla kokuqala, noma kwesinye isikhathi izinga lokukhiqizwa kwe-enzyme liqala ukuwa ngemuva kweminyaka emithathu. Njalo ngonyaka, izimpawu zalesi sifo ziyaqina, futhi akunakwenzeka ukufeza ukululama okugcwele.
Ukunciphisa izinga le-lactase ekhiqizwa ngumzimba kuya ngesimo sempilo.
Ukukhiqizwa kwe-enzyme ye-lactase kwenziwa kumaseli we-rectum. Noma yiziphi izifo zokuvuvukala (isifo sohudo, umkhuhlane wamathumbu) zithinta kabi ukukhiqizwa kwe-lactase, ngoba amangqamuzana alimala ngamagciwane we-pathogenic, ama-microorganisms noma eminye imiphumela. Ukuvela kokungabekezelelani kwe-lactose ebusweni bezimbangela kanye nezinto ezibangela ukubizwa kwangaphambili ibizwa nge-hypolactasia yesibili.
Izimbangela ezilandelayo zinomthelela wokuthi kuvela i-hypolactasia yesibili:
ukuvuvukala emathunjini (isifo sikaCrohn, i-colitis, izilonda),
ukuhlinzwa okuhlukahlukene amathumbu nesisu,
izifo ezithathelwanayo, kufaka phakathi lezo ezingahambisani namathumbu (isisu, i-rotavirus, ukutheleleka kwamathumbu, umkhuhlane),
ukulimala kwesisu okuthinte ukusebenza okujwayelekile kwezitho zangaphakathi,
ukusetshenziswa isikhathi eside noma njalo kwamagciwane, lapho ukuvela kwe-lactase kungancipha kakhulu noma kumise ngokuphelele,
Izifo kanye ne-pathologies ehambisana ne-atrophy ye-villi yamathumbu amancane (gastroenteritis, giardiasis, isifo se-celiac),
pancreatitis engapheli, lapho ukukhiqizwa kwama-enzymes yi-pancreas kwenzeka ngokwephulwa,
ukungezwani kokudla futhi kubangela ukungabekezelelani kwe-lactose ngokwenzeka kokuphendula komzimba ebusweni be-mucosa we-rectal,
ukuvezwa kwemisebe, kanye ne-chemotherapy, lapho izidakamizwa ezinolaka noma ukuvezwa kubulala khona amaseli omzimba,
ukusetshenziswa ngokweqile nge-lactose (ukusetshenziswa kwamaprotheni obisi ngamanani amakhulu) kungavusa i-hypolactasia,
ukuphazamiseka kwe-hormonal kuthinta nenani le-lactase eyenziwe.
Noma yiziphi izizathu, kanye nokuhlanganiswa kwazo, kungadala ukungabekezelelani kwe-lactose, okunganqunywa yizimpawu zokuqala nezesekondari. Ngaphezu kwalokho, ngohlobo lwesifo esitholakele, umuntu angathembela ekululameni ngokuphelele, ngoba ngemuva kokuqeda izimbangela eziyinhloko, amangqamuzana asesibelethweni ayabuyiselwa, futhi ukwenziwa kwe-enzyme kufanethwe.
Izimpawu zokuqala zokubekezelela
Ukungabekezelelani kwe-lactose, izimpawu zazo ezibonakala njengomphumela wokungakwazi ukwenzeka kwe-disaccharide emathunjini ngezinga elanele, kuvezwa njengezinkimbinkimbi zezimpawu. Ngemuva kokudla imikhiqizo enamaprotheni obisi, i-disaccharide engafakwanga ingena emathunjini amakhulu, lapho kuvela indawo ezuzisayo yama-microorganisms ayingozi.
Ngaphansi kwethonya lawo, i-lactose ihlehlela ku-hydrogen, isikhutha, amanzi ne-lactic acid, okukhombisa izimpawu zokuqala ezifana nezifo zepheshana lesisu.
ukuthopha (ukukhushulwa kwengezwe, ukuqhakaza nokuqhuma esiswini),
Ukungabekezelelani kwe-lactose kunezimpawu ezihlukile. I-Flatulence ingenye yazo.
ukuminyanisa, usizi nobuhlungu besisu, okuyisimo ngezikhathi ezithile,
izitofu ezixegayo, lapho izakhi zokudla okungaphanjwanga zingaba khona,
ukungabikho ngokuphelele noma isifiso sokudla esingesihle.
Izimpawu zokufika kwesikhathi
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwesifo nokuphindaphinda okuphindaphindiwe kwezimpawu, kutholakala izimpawu ezingathi sína ezibangela impilo engeyinhle.
Ngezitulo ezikhululekile ezihlelekile, iziguli ziqala ukukhipha ukomisa, okuholela ebuhlungu bekhanda, ukozela. Ukuphelelwa ngamandla emzimbeni kungadala ukusikeka nokwanda okukhulu kwezinga lokushisa.
Ngokuphikisana nesizinda sokuphelelwa ngamanzi emzimbeni, ubuthakathaka obujwayelekile buyabonakala. Izinga lamavithamini egazini lehla kakhulu, okubangela ukwehla okujwayelekile kokungazinzi komzimba. Isimo sesikhumba siyanda, kuvela izinyembezi, amanxeba amancane angapholi, ukuqubuka.
Ngenkambo ende yesifo ngaphandle kwemithi efanelekile, ukuncipha kwesisindo kuyaqala. Konke lokhu kungadala ukubambezeleka ekukhuleni nasekuthuthukisweni ebuntwaneni nasebusheni.
Ukwehla komzimba kanye nobuhlungu besisu obuhlelekile kubangela izinkinga ngokulala, kuhlaselwe ukukhathazeka. Umuntu uqala ukuzwa ukukhathala okungapheli. Isimo esibi sobukhosi siyabusa, sikhinyabezele ukucasuka.
I-acid iyakhula ngokuhamba kwesikhathi, lapho izinga lokulinganisa kwe-acid emzimbeni selishintsha libheke kwi-acidity ephezulu. Ukwanda kwe-acidity kuthinta kabi isimo semithambo yegazi nombono.
Ubuhlungu besisu kanye nenausea, kanye nokuphazamiseka kokugaya ukudla, kubangela ukungasebenzi kahle enhliziyweni, kubangele i-tachycardia noma ukuphazamiseka. Isifo senhliziyo sesiguli singanda.
Ngokuya ngezinga lokuhlanganiswa kwe-lactase ngumzimba kanye nesimo sempilo, izimpawu zingabonakala ngokuhlanganiswa okuningana ngezindlela ezinzima noma ezimnene.
Ukwelashwa kokungabekezelelwa kwe-lactose kubantu abadala nasezinganeni
Kungemva kokuhlolwa okuningana kuphela lapho ukuxilongwa kutholakala khona nokwelashwa kushiwo. Ngasikhathi sinye, ukungabekezelelani kwemvelo ye-lactose akunakuphathwa, ngoba kubangelwa ukuguqulwa kwezakhi zofuzo.
Esimweni sefomu elitholile lesifo, amathuba okululama makhulu ngokwendlela ehlukahlukene yezindlela zokwelashwa:
Ukwelashwa, imbangela enesandla ekuqaleni kwalesi sifo iqedwa. Ngakho-ke esimweni sokutheleleka kwamathumbu noma umkhuhlane, izidakamizwa ezilwa negciwane (i-Cytavir, i-Anaferon, iKagocel) noma ama-antibiotic (Amikacin, Sumomed) anqunyelwe.
Njengomthombo we-lactase, kusetshenziswa izithasiselo zokudla (i-Lactazar, i-Lactase), ezisetshenziselwa ukwenza inqubo yokutholwa kokudla.
Ngasikhathi sinye, kulungiselelwe amalungiselelo e-enzymatic (Festal, Pancreatin).
Inkambo yama-prebiotic isiza ukubuyisa i-microflora yamathumbu (Acipol, Linex, Bifiform, Bifidumbacterin).
Imithi inconywa ukuthi isuse izimpawu ze-hypolactasia futhi idambise isimo esijwayelekile.
Izidakamizwa ezinqunyelwe ukubuyisa amazinga we-calcium, kufaka phakathi lawo anenkimbinkimbi yamavithamini (i-calcium D3 Nycomed, i-calcium gluconate, iCompllevit calcium D3).
Njengomuthi wokuqala, kunconyelwa ukudla okungekho lactose noma ukudla ngenani elincishisiwe le-lactose kubantu abadala nasezinganeni.
Yini engathatha indawo yemikhiqizo yobisi ngokungabekezeleli kwe-lactose?
Amaprotheni obisi awatholakali kuphela emikhiqizweni yobisi nemikhiqizo yobisi, kodwa nasososeji, amasoseji, empahleni enziwe ngamakhekhe, namakhekhe, iziphuzo. Ukushiya ngokuphelele imikhiqizo enjalo, engagcini ngokunambitha nje kuphela, kodwa futhi equkethe izakhi eziningi zomzimba, kusho ukunciphisa imingcele yamavithamini nezakhi zokudla ekudleni.
Noma kunjalo, ukufaka esikhundleni ubisi kusatholakala:
Enye indlela ingaba ubisi lukakhukhunathi. Ngayo ungapheka okusanhlamvu, ama-smoothies. Kepha kubalulekile ukuphuza ubisi olusha lwe-skim, ngoba umkhiqizo owenziwe ngamakhemikhali ufaka ama-stabilizer kanye ne-gar gum, okudala izimpawu ezifanayo ne-hypolactasia.
Ucebile ku-calcium no-vithamini D, ubisi lwamantongomane. Ungayithenga noma uyipheke ngokwakho. Ukuze wenze lokhu, thatha noma yimuphi amantongomane athosiwe. Ngokuvamile, ama-alimondi noma ama-cashews asetshenziswa. Susa isikhumba esimnyama kubo. Amantongomane abekwa endishini ye-blender bese kufakwa amanzi amaningi izikhathi ezi-2. Ngemuva kwalokho le ngxube ishaywa ngokuphelele imizuzu emi-5 bese ihlungwa ngesihlungo esihle ukuze kususwe izinhlayiya ezinkulu. Ubisi lwe-Walnut luphenduka ukungathathi hlangothi ngephunga elimnandi elimnandi. Ubisi lwe-Walnut luzosiza noma isiphi isidlo, into esemqoka ukusinyakazisa ngaphambi kokusebenzisa.
Ubisi olungenayo i-lactose lwenziwa ngelayisi. Kulokhu, 200 g welayisi abilisiwe, 2 tbsp. amanzi, 2 tbsp isiraphu nerayisi 1 isipuni isitashi selayisi sihlanganiswa ne-blender futhi silethwe kumathumba phezu kokushisa okuphansi. Ingxube kumele ivuswe njalo bese ihlungwa. Umphumela ubisi olufana olungahlukani futhi olunambitheka obumnandi. Ubisi lwerayisi lufakwa ekofi, etiyeni, kophudingi noma ezinkomeni.
Ngendlela efanayo, ubisi lwe-oat luyalungiswa, lufaka isiraphu noshukela. Ngaphezu kwe-calcium ne-Vitamin D, ubisi lwe-oat lunothile ku-Vitamin E, i-folic acid, futhi luqukethe ne-fiber.
Izimpawu ezihambisana nokungabekezelelani kwe-lactose zixhomeke kakhulu ekudleni futhi zinganyamalala ngemuva kokuguqukela esikhundleni sobisi. Ubisi olungenayo i-lactose aluqukethe i-lactose kuphela, kodwa ne-cholesterol. Ungayihlanganisa nanoma yiluphi uhlobo lomkhiqizo.
Kukhanya futhi kuyanambitha. Kunconywa ukusebenzisa izikhala zobisi ngenani elizosiza ekulinganiseni i-vitamin-mineral esele emzimbeni futhi, kanye nokudla okufanele, ukwelashwa, kululama ngokuphelele.
Idizayini yokuklama: ULozinsky Oleg
Yini i-lactose futhi kungani idingeka
ILactose (ushukela wobisi) iyinhlangano ekhethekile ye-carbohydrate eqenjini le-saccharide, eliyingxenye yayo yonke imikhiqizo yobisi. Izakhiwo zamakhemikhali nezomzimba ze-lactose zinkulu kangangokuba azibanjwa ngumzimba womuntu ngesimo sazo sokuqala, kepha zihlukaniswe ngamangqamuzana kashukela alula - ushukela kanye ne-galactose.
Inkambo ejwayelekile yale nqubo ihlinzekwe yi-lactase, i-enzyme ekhethekile ekhiqizwa izindonga zesisu esincane.
Inzuzo enkulu ye-lactose ukuthi ibamba iqhaza ezinqubweni eziningi ze-metabolic ezenzeka emzimbeni womuntu, zenze okujwayelekile futhi zivuse inkambo yazo.
Ngaphezu kwalokho, ushukela wobisi usiza kakhulu ukusebenza okufanele kwezinto zokugaya, zenhliziyo, amasosha omzimba nezinzwa.
Ukulimala kwe-lactose yomzimba kuyabonakala ezimweni zokusetshenziswa ngokweqile kwemikhiqizo yobisi (ikakhulukazi kubantu abanesifo sikashukela).
Ama-monosaccharides aqukethe i-lactose kumthamo ngamunye abangela ukukhuphuka okuthe xaxa kwe-insulin egazini, okuthi yenze kabi inhlala-kahle yomuntu.
Elinye iqembu labantu okufanele liqaphele kakhulu ngemikhiqizo equkethe ushukela wobisi yilabo abane-pathology yokuzalwa noma etholakele - ukungakwazi ukumunca i-lactose.
Izizathu zokuthuthuka kwe-pathology
I-Lactose ukungabekezelelani (i-hypolactasia) kungukuphazamiseka kwe-pathological ohlelweni lokugaya ukudla, okuvezwa ngokungamukeleki ngokuphelele noma okuyingxenye koshukela obisini ngumzimba.
Isizathu sale nto ukuntuleka noma ukungabikho kwe-encyme ye-lactase ebhekele ukuwohloka okufanele kwesakhiwo se-carbohydrate.
Ukungabekezelelani kwe-lactose kungaba yisisekelo (ukuzalwa kabusha) noma kwesibili (kutholwe).
Esimweni sokuqala, i-pathology inqunywa ngofuzo: amathumbu omuntu awakwazi ukukhipha i-enzyme efiselekayo kusukela ekuzalweni, ngakho-ke, imikhiqizo equkethe i-lactose, lapho isetshenziswa, ibangela ukusabela okuhlukahlukene okuvela emzimbeni. Lokhu kuguqulwa kwezakhi zofuzo akuvamile - ngabantu abangama-5-6% kuphela.
Inkinga evame kakhulu ukungabekezelelani kweshukela ushukela. Ukhula njengomphumela wokutheleleka kwamathumbu noma izifo ezibangelwa amagciwane, ngokumelene nesizinda sezinqubo zomzimba noma ukuthatha imishanguzo, ngesifo se-celiac noma ukuphazamiseka kwe-pancreatic.
Le ndlela yokusebenza kwe-pathology iyadlula, ukuze kwenziwe kukhiqizwe i-lactase ngokwejwayelekile, kuyadingeka ukuqeda imbangela ethinte le nqubo.
Ukudla kwe-Lactose-free: yikuphi ukudla okuvunyelwe
Kunzima nokho ukuphendula umbuzo wokuthi yimiphi imikhiqizo equkethe i-lactose; uhlu luzoba lide. Vele, ubisi luphethe irekhodi lokuqukethwe kwe-carbohydrate, ngaphezu kwalokho, i-lactose iqukethe:
imajarini namakhekhe ngokususelwa kuwo,
neminye imikhiqizo eminingi.
Lapho kukhona i-hypolactasia, ukudla kufanele kukhethwe ngokucophelela.
Ubisi nemikhiqizo yobisi kuhlinzeka umzimba nge-calcium, ngakho-ke uma kudingeka ukuthi wenqabe ngokuphelele noma ngokwenxenye, kuyadingeka ukuphambukisa ukudla ngokudla okunokuqukethwe okuphezulu kwalesi sakhi.
Isibonelo, kufanele ufake phakathi imenyu njalo:
ushizi we-soy ongenayo i-lactose,
ama-tuna aqoshwe emanzini, isalimoni, isardine,
ubisi olungenayo i-lactose (kusuka ku-soya, ukhukhunathi, ama-alimondi),
neminye imikhiqizo yobisi engenayo i-lactose.
Nge-hypolactasia, ukwengeza ukushoda kwamavithamini namaminerali, kunconyelwa ukusebenzisa njalo imikhiqizo engenalo i-lactose:
isinkwa nepasta ngaphandle kwe-Whey.
Kukholakala kabanzi ukuthi nge-hypolactasia, ubisi lwenkomo lungabekwa ubisi lwembuzi, ngoba i-lactose ebisini lezimbuzi ayicasuli kangako ohlelweni lokugaya ukudla.
Eqinisweni, lo mbono unephutha: noma yiliphi inani likashukela wobisi emkhiqizweni uma kwenzeka ukuphazamiseka ekukhiqizweni kwama-enzyme kuzovusa izimpawu zokungabekezeleleki kwe-lactose kubantu.
Ngokufanayo, i-lactose isebenza ku-kefir, i-cottage shizi neminye imikhiqizo yobisi, ebhekwa "njengombandela" iphephile kulabo abahlushwa i-hypolactasia.
Umkhakha wokudla uhlala uvela futhi uphendula ngokushesha ekushintsheni kwezidingo zabantu.
Labo, ngenxa yezizathu ezithile, abafaki ushukela wobisi ekudleni, ezitolo ezinkulu nasezitolo ezikhethekile namuhla bakulungele ukunikela ngemikhiqizo yokudla efanelekile ehlukahlukene:
ezinganeni - ingxube eyenziwe ngobisi eyenziwe ngomumo ngaphandle kwe-lactose,
Abasubathi - Amaprotheni angenayo i-Lactose-protein
abathanda amaswidi - u-ayisikhilimu ongenayo i-lactose nokuningi.
Hambisa in cooker noma umenzi weyogathi kancane
I-yogurt ephilayo yamahhala ye-Lactose yenziwa ngobisi lwe-alimondi noma lukakhukhunathi. Ukuze uthole umkhiqizo onempilo futhi onempilo, uzodinga ukuthenga ekhemisi noma uku-oda nge-inthanethi inhlama ekhethekile yobisi engenawo ubisi.
ubisi ngaphandle kwe-lactose - 1 l.,
i-sourdough - 5 g.,
i-thermometer yokulinganisa izinga lokushisa kobisi.
Abilayo izimbiza zeyogathi.
Thela ubisi epanini.
Preheat to 82 ° C,
Vumela ukupholile kuye ku-42-44 ° С.
Thela i-100 ml esitsheni esincane. ubisi.
Hluphula uketshezi kahle nge-whisk.
Thela ubisi nge-sourdough esitsheni esikhulu ngobisi.
Gcwalisa izimbiza ngobisi.
Thumela kumenzi weyogathi noma umpheki ohamba kancane onomsebenzi ofanele amahora angama-10-12.
I-yogurt elungele ukunikeza abantu ubukhulu iyasuswa esiqandisini amahora amaningi.
Ukudla ikhekhe Lactose Cake
Le dessert enempilo futhi emnandi ilungiswa ngaphandle kobisi futhi nangofulawa welayisi, ngakho-ke isetshenziswa ngisho nabantu abavinjelwe ngokushesha i-gluten ne-lactose ngezizathu zokwelashwa.
4 abamhlophe beqanda
100 g kafulawa welayisi
0.5 ithisipuni kalamula,
1 tbsp. amanzi
35 g wesitashi sombila
45 g uju
ingxenye yesine ye-vanilla pod
Shaya ama-squirrels kuze kube yilapho igwebu elisindayo.
Faka ushukela, usawoti kanye ne-zest kubo.
Qhubeka nokushaya kuze kube yilapho iifomu eziqinile zekhanda.
Hlanganisa ngobumnene kuze kube bushelelezi.
Gcoba isitsha sokubhaka ngamafutha.
Fafaza ufulawa omncane.
Faka ikhekhe lesiponji kuyo.
Bhaka ibhisikuni kuhhavini ku-180 ° C imizuzu engama-25.
Ngenkathi isisekelo sibhaka, bilisa amanzi.
Hlanganisa izikhupha ne-starch, i-vanilla, i-zest nosawoti.
Thela ingxube emanzini ashisayo ngomfudlana omncane, uvuse yonke into nge-whisk.
Cindezela uketshezi epanini.
Beka umlilo omncane.
Letha ukhilimu ukuze ulungele, uvuse njalo.
Lapho ibanda kancane, engeza uju.
Iqede ibhisikidi usike ubude kukhekhe ama-2.
Ngaphambi kokuphaka, ikhekhe lokudla elingenayo i-lactose lihlotshiswe ngezicucu zezithelo ezintsha noma zomakheni namajikijolo, uma efiswa.
Impikiswano mayelana nobungozi nezinzuzo ze-lactose ibilokhu iqhubeka iminyaka eminingi, futhi kusekhona abasekeli abaningi besidingo salolu carbohydrate kubantu kunabaphikisi.
Kodwa-ke, abanye abantu baphoqeleka ukuthi bayeke ukusetshenziswa kwemikhiqizo yobisi hhayi nganoma yisiphi isizathu, kodwa ngenxa yezizathu zokwelashwa: ngenxa yokungabekezelelani kokuzala noma kwe-lactose.
Kepha futhi le ndlela namuhla ayinakuyonakalisa kakhulu impilo yomuntu uma esondela futhi ngokucophelela ekwakhekeni kokudla kwakhe.
Funda ngokungabekezeleli kanye nokulimala lapha.
Kulokhu, ukubonakaliswa kwesithombe somtholampilo kanye nokuqina kwaso kuya ngesilinganiso sokukhiqizwa kwe-lactase. Ezimweni eziningi, izimpawu zokungabekezelelani kwe-lactose zibonisa kungakapheli imizuzu engama-30 - amahora angama-2 ngemuva kokudla imikhiqizo yobisi.
Izimpawu zokungabekezelelani kwe-lactose yilezi ezilandelayo:
isicanucanu, imvamisa ngezindlela zokuhlanza,
Ubuhlungu kanye nokugoba (ngokungabekezeleli ngokuphelele i-lactose).
Ukwanda kokubonakaliswa kwesithombe somtholampilo kuya ngezinga lokungabekezelelani kwe-lactose kubantu abadala noma ezinganeni. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuqondwe ukuthi ukuphendula okunjalo komzimba kwimikhiqizo yobisi kungenzeka kungenxa yomkhiqizo osezingeni eliphansi, ukungahambisani kwemikhiqizo, nokunye. Uma ngabe lesi sithombe somtholampilo siyavela njalo ngemuva kokudla ubisi nemikhiqizo nokuqukethwe kwabo, kufanele uthintane nodokotela ukuze uthole izeluleko.
Ukungabekezelelani kwe-lactose ezinganeni kungenziwa ngezimpawu ezilandelayo:
ukugabha ngemuva kokudla
Njengomthetho, izimpawu zibonakala ngokushesha ngemuva kokudla ukudla.